Kule manani, ixesha labantu lisetyenziselwa ukuchaza izifundo zezifundo ezithile-yonke into okanye wonke umntu ophantsi kwenkcazo yokubala. Amanani angabininzi okanye amancinci ngobukhulu kwaye achazwe nayiphi na impawu yeempawu, nangona la maqela echazwe ngokuthe ngqo kunokuba angabonakali-ngokomzekelo, inani labasetyhini abangaphantsi kwe-18 abathengela ikhofi kwi-Starbucks kuneli nani labasetyhini abangaphezu kwe-18.
Izibalo ezisetyenziselwa ukugcina iziphathamandla, iindlela kunye neepatheni ngendlela abantu abathile kwiqela elichaziweyo badibanisa nehlabathi elibangqongileyo, ukuvumela abadlali beenkcukacha-zibalo ukuba benze izigqibo malunga neempawu zezifundo zokufunda, nangona ezi zihlandlo zidla ngokuba ngabantu, izilwanyana , kunye nezityalo, kunye nezinto ezifana neenkwenkwezi.
I-Australian Government Bureau of Statistics ithi:
Kubalulekile ukuqonda abantu abajoliswe kuwo, ukuze ukwazi ukuba ngubani na okanye yiphi idatha ebhekiselele kuyo. Ukuba awucacanga ngokucacileyo ukuba ngubani okanye into oyifunayo kubemi bakho, unokuphelisa ngeedatha ezingenakunceda kuwe.
Kukho, ke, ukulinganiselwa ezithile ngokufunda abantu, ngokuyininzi kuba akunqabile ukuba bakwazi ukugcina bonke abantu kwiqela ngalinye. Ngenxa yeso sizathu, izazinzulu ezisetyenzisiweyo ziphinda zifunde iiprogram kwaye zithathe iisampuli zamanqaku amancinci abantu abaninzi ukuba bahlalutye ngokuchanekileyo ukuziphatha okupheleleyo kunye neempawu zoluntu ngokubanzi.
Yintoni eyenza abantu abemi?
Inani labalinganiswa naliphi na iqela labantu abathile bahloliselwe isifundo, oku kuthetha ukuba phantse nantoni na inokubangela uluntu ngokukhawuleza ukuba abantu banokuqulunqwa kunye nomsebenzi oqhelekileyo, okanye ngamanye amaxesha aqhelekileyo. Ngokomzekelo, kwiphononongo ezama ukucacisa ubunzima bobunzima babo bonke abesilisa abaneminyaka engama-20 ubudala eUnited States, inani labantu liza kuba yindoda eneminyaka engama-20 ubudala e-United States.
Omnye umzekelo uza kuba yiphando elingaphi abantu abahlala eArgentina apho uluntu luya kuba ngumntu wonke ohlala e-Argentina, kungakhathaliseki ukuba ngummi, ubudala, okanye ngesini. Ngokwahlukileyo, isibalo sabantu kwisifundo esithile sabuza ukuba bangaphi amadoda angaphantsi kwe-25 ahlala eArgentina angaba ngamadoda angama-24 nangaphantsi ahlala eArgentina kungakhathaliseki ukuba ngummi.
Izibalo zengqapheli zinokungacacanga okanye zithile njengoko i-statistician ifuna; ekugqibeleni kuxhomekeke kwinjongo yophando oluqhutywa. Umfuyi weefama akafuni ukungazi iifomati zingaphi iinkomokazi ezibomvu zowesifazane; Kunoko, wayefuna ukwazi ulwazi malunga nokuba zininzi iinkabi anazo ezikwazi ukuvelisa amathole. Lo mlimi wayefuna ukukhetha olu hlobo lokufunda njengabantu abaninzi.
Idatha yoluntu esebenzayo
Kukho iindlela ezininzi ongasebenzisa idatha yoluntu kwimanani. I-StatisticsShowHowto.com ichaza imeko ejabulisayo apho uxhathisa isilingo kwaye uhambe kwisitolo se candy, apho umnini angase anike iisampulu ezimbalwa zemveliso yakhe. Ungadla iswidi enye kwisampula nganye; awunakufuna ukutya isampuli ye-candy yonke kwisitolo. Oku kuya kufuna isampuli kwikhulu leemithi, kwaye mhlawumbi kunokukwenza ugula kakhulu.
Endaweni yoko, iwebhusayithi yebalathisi ichaza:
"Unokusekela uluvo lwakho malunga nomgca we-candy egciniweyo (nje) iisampuli abanikezelayo." Ingcamango efanayo ifanelekile kwiinkalo ezininzi zophando. Ufuna kuphela ukuthatha isampula kubo bonke abantu ( "Abantu" kulo mzekelo kuya kuba ngumgca we-candy).
I-ofisi yaseburhulumenteni yase-Australia inikezela ngeminye imizekelo emibini, eguqulelwe apha apha. Khawucinge ukuba ufuna ukufunda kuphela abantu abahlala eUnited States abazalwa ngokugqithiseleyo-isihloko esichukumisayo sezopolitiko namhlanje ngokubhekiselele kwingxabano yesizwe evuthayo ngokufuduka. Kunoko, nangona kunjalo, ukhangele ngengozi bonke abantu abazalelwa kweli lizwe. Idata ibandakanya abantu abaninzi ongazifuni ukufunda.
"Unokuphelisa ngeenkcukacha ongeyidingi ngenxa yokuba uluntu lwabantu abajoliswe kuyo alucaciswanga ngokucacileyo, luchaze i-statistical bureau.
Olunye uphando olufanelekileyo lunokuba lubukeka kubo bonke abantwana besikolo samabanga aphezulu abasela isoda. Kuza kufuneka ucacise ngokucacileyo abantu abajoliswe kuwo njengaba "abantwana besikolo esiprayimari" kunye "nabo baphuza i-soda pop", ngaphandle koko, unokugqiba nedatha ebandakanya bonke abantwana besikolo (kungekhona nje abafundi esikolweni samabanga aphezulu) kunye / okanye zonke abo baphuza i-soda pop. Ukubandakanywa kwabantwana abadala kunye / okanye abo bangaphuziyo i-soda pop bangayifumana imiphumo yakho kwaye mhlawumbi benze isifundo singenakwenzeka.
Nangona isibalo sabantu sithandayo ukuba sifunde, akunakunqabile ukuba bakwazi ukwenza ubalo lwabahlali bonke abantu. Ngenxa yemithintelo yezixhobo, ixesha, kunye nokufikeleleka, akunakwenzeka ukuba enze umlinganiselo kwisifundo ngasinye. Ngenxa yoko, amaninzi amaninzi, izazinzulu kunye nabanye basebenzisa izibalo ezingenasiphelo , apho izazinzulu zikwazi ukufunda kuphela inxalenye encinci yabemi kwaye zigcina iziphumo ezibonakalayo.
Esikhundleni sokwenza imilinganiselo kuwo wonke umntu uluntu, izazinzulu ziqwalasela i-subset yale nani ebizwa ngokuba ngumzekelo wesampula . Ezi sampuli zinika umlinganiselo wabantu abaxelela izazinzulu malunga nemilinganiselo ehambelana noluntu, oluya kuphinda luphindwe kwaye lufaniswe nama-sampuli ahlukeneyo ukuchaza ngokuchanekileyo lonke uluntu.
Umbuzo we-subsets of population kufuneka ukhethwe ngoko ke kubaluleke kakhulu ekufundeni amanani, kwaye kukho iindlela ezahlukeneyo zokukhetha isampuli, ezininzi zazo aziyi kuvelisa iziphumo ezinengqiqo. Ngesi sizathu, izazinzulu zihlala zikhangeleke ukuba zinokuthi zikhangeleke ngenxa yokuba zifumana iziphumo ezingcono xa zibona umxube weentlobo zabantu kwiindawo ezifundiswayo.
Ukusetyenziswa kwamashishini athile, okufana nokwenza iisampuli eziqingqiweyo , kunokukunceda ekujonganeni nemigqaliselo, kwaye ezininzi zalezi zindlela zicinga ukuba uhlobo oluthile lwesampula, olubizwa ngokuthi isampuli esilula , lukhethwe kubantu.
Ziziphi iimpawu zeShin Splints?
IYiputa YaseYiputa: Imfazwe yeKadeshe
Kutheni Kuthatha i-12 imizila yokufikelela kwi-300?
Isikhokelo seenkomfa zomhlaba